ဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက် ကိုယ်အလေးချိန် မြန်မြန်တတ်ခြင်းက Safe ဖြစ်ပါသလား? - Lifestyle Myanmar
Home Health & Beauty ဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက် ကိုယ်အလေးချိန် မြန်မြန်တတ်ခြင်းက Safe ဖြစ်ပါသလား?
ဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက် ကိုယ်အလေးချိန် မြန်မြန်တတ်ခြင်းက Safe ဖြစ်ပါသလား?
ကိုယ်အလေးချိန်တတ်ခြင်းက တဖြည်းဖြည်းချင်းဆိုရင် ကျန်းမာပြီး Safe ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မြန်တတ်တာက သဘာဝမဟုတ်ဘဲ များသောအားဖြင့် ပရိုတင်းအမှုန့်များ၊ ဆေးပြားတွေသောက်သုံးတဲ့ ရလဒ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်တတ်ဖို့ ဗီတာမင်သောက်သုံးခြင်းဟာ ဆရာဝန်အကြံပြုထားတာ ဖြစ်ရပါမယ်။ အောက််ပါကျန်းမာရေးပြဿနာများက အလျင်အမြန် ကိုယ်အလေးချိန် တိုးခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေပါတယ်။
ကြွက်သားစုဆောင်းခြင်းက အချိန်ယူရပါတယ်- ပျမ်းမျှအားဖြင့် ဆယ်ကျော်သက်ကလေးဟာ တစ်ပတ်လျှင် ကြွက်သား တစ်ပေါင်ဝက်ထက်နည်းပြီး တည်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်အလေးချိန်တတ်တာ မြန်ဆန်လျှင် ခန္ဓာကိုယ်က အဆီစုဆောင်းတာကြောင့် အဝလွန်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အလျှင်အမြန် ကိုယ်အလေးချိန်တိုးတာက ဆိုဒါနှင့် သကြားအစားအစာတွေ မြင့်မားသော အချည်းနှီးကယ်လိုရီကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါက ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရများကင်းမဲ့တာကို ညွှန်ပြနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်မြန်မြန်တိုးတာက မူးဝေခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့် သွေးပေါင်ချိန်တိုးခြင်းကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ ကိုယ်အလေးချိန် လျှင်မြန်စွာ တတ်လာခြင်းက သူတို့ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာ အကြောပြတ်ရာတွေ ကျန်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်တိုးဖို့ ခန္ဓာကိုယ်ကို တွန်းအားပေးတဲ့အခါ စိတ်ဖိစီးမှုများစွာကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆယ်ကျော်သက်တွေဟာ ကိုယ်အလေးချိန်မြန်မြန်တိုးလာရင် စံပြကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းနိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
ပရိုတိန်းအစားအစာ များများစားတာကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်း- ဆယ်ကျော်သက်ကလေးတွေ၊ အထူးသဖြင့် ယောကျာ်းလေးတွေဟာ ထွားလာစေဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက ပရိုတိန်းအစားအစာကို များများ စားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပရိုတိန်းအမှုန့်တွေနှင့် ဖြည့်စွက်ဆေးတွေ အကူအညီဖြင့် ကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်းက ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်တိုးတဲ့ ဖြည့်စွက်ဆေးတွေ အသုံးပြုလိုပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Previous articleဆယ်ကျော်သက်လေးတွေအတွက် ကိုယ်အလေးချိန်တိုးစေဖို့ သိကောင်းစရာ (၁၀)ခု
Next articleFacebookသုံးပုံကနေ သိနိုင်တဲ့ သင့်စိတ်နေစိတ် ထားနဲ့စွဲလမ်းမှုများ